दाङकी चेली डा. निगाता मिस नेपालको फाइनलमा - Goraksha Online
काठमाडौं,६ मंसिर। देशभरिका २ सय बढी प्रतिष्पर्धीहरुलाई उछिनेर दाङकी चेली डा. निगाता केसी मिस नेपाल २०२० को फाइनलमा पुगेकी छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१५ रतनपुर निवासी बिष्णुबहादुर केसी र ललिता केसीकी कान्छी छोरी डा निगाता पढार्इलगायत अन्य क्षेत्रमा उत्तिकै अब्बल छिन् । कला क्षेत्रमा विशेष रुचि राख्ने निगाताले चिकित्सा विषयमा एमबिबिएस सकाएकी छिन् । वहुप्रतिभाशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्वकी धनी २४ वर्षीया निगाताको उचाइ ५ फिट ५ इन्च छ ।
प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी चलिरहँदा आयोजक हिडन टिजर्सले मिस पपुलर च्वाइस अवार्डको लागि मतदान खुल्ला गरेको छ । यो अवार्डका लागि निगाताले आफूलाई भोट गर्न सबैलाई अपील गरेकी छिन् । आइएमइ पे (Ime Pay app) एप डाउनलोड गरी सोमार्फत प्रतिष्पर्धी नं. ७ की निगातालाई भोट गर्न सकिन्छ । मिस नेपाल २०२० को फाइनलमा २१ जना प्रतिष्पर्धीहरु छन् ।